Semalt waxay muujinaysaa Tricks-ka Twitter-kaaga si aad u sarayso ganacsi
Laga bilaabo Jimcaha iyo Madow Jimcaha on Facebook iyo Twitter si ay ula shaqeeyaan kuwa jecel farshaxanka Tumblr iyo Instagram, waxaa jira istaraatiijiyado iyo farsamooyin kala duwan si ay u helaan guusha online sida ganacsade. Haddii aad isticmaashay Facebook oo aad doonaysid inaad tijaabiso Twitter, halkan waxaan ku wadaagney talooyin xiiso leh oo bilaash ah.
Waxyaabaha ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad abuurto boggaga xirfad-ilaalineed ee Twitter-ka ah iyo dhamaystirkaaga bini aadamka. Helitaanka taageerayaasha warbaahinta bulshada ma fududa, sidaas darteed waa inaad si adag u shaqeysaa. Waxaa la yiraahdaa waa inaad qorsheysaa waxyaabaha sida ugu haboon gaar ahaan marka aad ku cusub tahay Twitter oo aadan aqoonin wax walba oo ku saabsan. Bilowga, waxay kugu qaadan doontaa wakhti aad ku qaadato dad badan iyo in ka badan - quickbooks online sharepoint.
Frank Abagnale, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Semt , ayaa sheegay in isticmaalka Twitter uu ka fiican yahay oo sahlan yahay isticmaalka Instagram iyo Facebook. Waxa kaliya ee lagaa rabaa inaad dadka ku dhiirrigelisid in ay raacaan, tanina waa la samayn karaa haddii aad qorshaha si sax ah u qorsheyso oo aad dadka ku dhex marsiiso adigoo wadaagaya tayada tayada iyo waxyaabo aad u fiican.
La shaqee Algorithm Twitter
Dadka intooda badan ma garanayaan muhiimada ay algorithm ku leedahay Twitter mana garanayso in la shaqeyn karto waxay kordhin kartaa tiradooda dadka raacsan. Bixiyeyaasha digitalka iyo maamulayaasha warbaahinta bulshada ayaa ogsoon in la shaqeynta algorithm ee Twitter inay muhiim u tahay magac iyo milkiilayaasha bogga..Waa in aad isha ku haysaa waana inaad barataa nooca kor u kaca iyo hoos u socoshada.
Isticmaal fiidiyowga Twitter
Isticmaalka fiidiyowga Twitter wuxuu ku siin karaa dad badan oo raacsan, wadaag iyo jecel wakhti aan waqti lahayn. Suuqa warbaahinta bulshada suuq-geynta fiidiyowga waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu balaarin karo ganacsigaaga, tanina waxa lagu muujiyay maqaalo badan. Ka sokow bogga Twitter, waxaad dooran kartaa Snapchat, YouTube, iyo Instagram fiidiyo si aad u kordhiso tirada dadka raacsan. Aragtida guud ee muuqaalkaaga warbaahinta bulshada waa inuu ahaadaa mid aad u qibrad badan oo xiiseynaya
Imisa sawir oo aad wadaagto maalin kasta? Waa hagaag, fikrad waa in aad isticmaashid Twitter maalin kasta oo masiixiyana ku haya hal dhinac ama kan kale. Soo dir tweets kasta toban daqiiqo waxay u ogolaan lahayd adduunka in ay ogaadaan in aad internetka tahay iyo diyaar u tahay inuu ku farxo taageerayaashaada. Tani waxay ugu dambeyntii kordhin doontaa tirade dadka raacsan, oo dadkaaga isticmaali doona inay si dheeraad ah uga qayb qaataan tweets aad.
Isku day waxyaabo kala duwan oo cusub
Waa lagama maarmaan inaad tijaabiso wax ka duwan, cusub oo aad u xiiso badan kuwa kale ee horey u qabtaan. Goontu waa maalmo markii dadku ay wadaagaan waxyaabo isku mid ah markale iyo mar kale. Maalmahan, dadku waxay soo jiidanayaan profiles kuwaas oo heysta sawiro sawir leh iyo waxyaabo cajiib ah. Taasi waa sababta ay tahay inaad isku daydo waxyaabo kala duwan oo aad ku tijaabiso waxyaabo cajiib leh si aad u heshid taageerayaal badan oo Twitter ah. Nidaamkani wuxuu u muuqan karaa mid adag, laakiin waa habka kaliya ee lagu hubin karo badbaadadaada internetka. Sidaa darteed haddii aad halis u tahay helitaanka aragtida internetka, waa inaad la xiriirtaa dad leh sheekooyin cajiib ah iyo mid gaar ah iyo sidoo kale maqaallo. Sidaas, waa maxay fikraddaada ku saabsan? Ha iloobin inaad fikradaada ku wadaagto sanduuqa faallooyinka ee hoose.